Xukumadda oo Hakad galisay qabashada codsiyada baasaboorka cusub
By WARIYAHA CAALAMKA On Sep 11, 2019
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay iney hakisay qabashada codsiyada baasaboorka cusub ee muwaadiniinta Soomaaliyeed u doonan jireen xafiisyada dowladda.
Hay’ada Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya oo caawa qoraal soo dhigtay bareheeda Bulshadda waxa ay ku sheegtay iney talaabadan qaaday. Waxeyna sababta ku micneysay arrimo la xiriira dhinaca farsamada. Wallow aysan bixin faah faahin intaasi ka buuran.
“Arrimo farsamo awgood. Waxaa muwaadiniinta Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan lagu wargelinayaa in mudo todobaad ah kana bilaabata September 14, 2019 ilaa September 21, 2019 la hakiyey qabashada codsiyada baasaboorka” ayaa lagu yiri qoraalka laanta Socdaalka Ka soo Baxay.
Soomaaliya Oo Ka Qayb Galaysa Tartan Ayna Abidkeed Ka Qayb…
Dowladda Kenya oo gaadiidkeeda dagaalka quus ka taagan
Joojinta dalbashada Baasaboorka Soomaaliga ayaa si isku mid ah uga dhaqan galaya guud ahaan dalka. Taasoo saameyn muuqata ku yeelaneysa dadkii arrimaha Caafimaadka u aadi jiray dalalka Caalamka. Kuwa Waxbarashada iyo dadka kale ee howlaha ganacsiga uga xiran yihiin Baasaboor qaadashada.
7-dii bishan. Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed S/Gaas Cabdi Xasan Maxamed oo kormeeray Xarunta hay’adda dembi baarista CID-da qeybteda faraha lagu qaado ayaa amray in la hakiyo howlaha ay qeybtaasi u qabato bulshada.
Lama oga in talaabadan cusub ee laanta Socdaalka iyo Jisniyadaha ay xiriir la leedahay howlaha is-daba jooga ah ee dowladda ku dooneyso iney dib u habeynta ugu sameyso howlaha ay bulshada u hayaan, tiiyoo ay sii dheer tahay qorshe looga hortagayo arrimaha Musuq maasuqa oo socda.
Sanbaloolshe:”waa iska deyneyna inaan Doorano qof aad loo…
Sep 17, 2019 25,914 0
134 qof oo lix kamid ah ay caruur yihiin oo lagu…
Waa Kuma Ciida Jubaland ku Matali Doona…
Sep 17, 2019 15,878
Askari 30 jir ah oo ku waashay dagaalka…
Sep 17, 2019 96,640
Madaxweyne Farmaajo oo soo xiray wajiga…
Sep 17, 2019 24,746